Ebee ka nkọwa ziri ezi SEO dị, tụlee Search Engine Marketing?
Enwere m ike ịza nzaghachi na-adịghị mma site n'aka ọtụtụ ndị ọchụnta ego na ọbụna ndị nwere ọganihu, ndị nwere ọgụgụ isi na ndị nwere ọgụgụ isi. Ha nile na-eme mkpesa nke ịbụ ndị mgbagwoju anya na usoro nke Search Engine Marketing (SEM) na nkọwa SEO zuru oke. N'ezie, echiche abụọ dị oke, ya mere, ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ekwukarị na ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Ka anyị chee ya ihu - ihe ka ọtụtụ n'ime ha adịghị anya na ha bụ ndị ziri ezi, na-eweta ọgba aghara dị ukwuu.
Ka anyị mee ka ihe doo anya. Ee, Search Engine Optimization (SEO) na Search Engine Marketing (SEM) na-ezigara na engines ọchụchọ. Ma ha na-eme ya na ụzọ 2 dị iche iche, ọ dịkarịa ala maka iji okwu dị iche iche. Echere m na, Marketing na Njikarịcha nwere nkọwa zuru oke na sara mbara, ọ bụghị ikwu ngwa ngwa ha. M na-atụ aro ka ị nyochaa ndepụta dị mkpirikpi nke ọdịiche dị iche n'etiti ha, iji nweta nghọta ziri ezi banyere SEM, nke zuru oke na nkọwa doro anya SEO.
Ka anyị nwee ihe atụ dị iche iche iji hụ ọdịiche n'otu oge. Were ya na Digital Marketing gị bụ ụgbọala. Maka ịrụ ọrụ ziri ezi, ụgbọala gị kwesịrị iji nlezianya na-elekọta engine ya, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, nwetaghachi mmanụ ọkụ. Na-ewere ihe ndị a ga-abụ ihe atụ dịka mmalite, anyị nwere ike iji usoro nro dị mfe. Ee, njirimara m n'atụghị egwu abụghị ihe ọhụụ ọ bụla, mana ha aghaghị ime, ọ dịkarịa ala maka ugbu a.
Nlekọta njikwa ngwaọrụ ga-adị na usoro nke Search Engine Optimization. Ọ na-ekpuchi akụkụ dị iche iche, dị ka ịlele nrụgide, mmanụ, ọkwa mmiri, nakwa dị ka ọtụtụ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ igwe. Maka ịrụ ọrụ ka mma, ịnwere ike ịnweta akụkụ ụfọdụ, ma ọ bụ dochie ndị dị na ndị ọhụrụ. Ime nke a, ị ga-enweta ahụmịhe ụgbọ ala kachasị mma kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe m kweere na nkọwa SEO dị mfe bụ. Iji mee ka ihe atụ a dịkwuo ọbụna kwenyesie ike, anyị nwere ike iji ya tụnyere nke a na-adịghị mma nke ụgbọala nke oke ọdụm nke ndị ọkwọ ụgbọala kpọrọ asị, m ga-ekweta.
N'aka nke ọzọ, a pụrụ iji Maịka Search Engine tụnyere nke a na-apụghị izere ezere ma na-ebigharị iji tinye gas dị n'ime tank mmanụ ụgbọ ala gị.N'iji okwu gara aga na-ekwu na ọrụ dị oke ọnụ na-arụ ọrụ maka nkọwa SEO dị mfe, ọ na-apụta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla na-akwado ma rụọkwa ọrụ nwere ike ịme ka ọ dị ntakịrị ka ọ bụrụ na ọ ga-abụ ihe ụfọdụ. Ime nke a (e. g. , na-ejikwa ebe nrụọrụ weebụ gị na mgbalị SEO kachasị njọ), ị ga-enwe ike iwepụ ọtụtụ nnukwu ego maka ogologo oge, mana ka ụgbọala gị na-agba ọsọ, ọ dịkarịa ala na ọkwa ala-elu. Njikere mmanu maka SMM, n'aka nke ọzọ, ka dị oke mkpa, ya mere ọ bụ nanị ụzọ ị ga - esi eji ụgbọala gị, na - ebugharị ụzọ gị ebe ịchọrọ na mgbe ị chọrọ maka oge niile.
SEO na SEM na-arụ ọrụ n'otu ubi. M na-eme ka ndị ọbịa bịa na ntanetị gị. Maka nkọwa zuru ezu SEO, ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa nke kachasị mma ma kwadoro ga-eme ka ị nweta okporo ụzọ ndị ọzọ. Ọ bụ ego dị ogologo oge ma na-arụsi ọrụ ike, nke na-emesi gị ike na ndị na-ere ahịa n'ezie na-ere, ya mere ego. SEM betting na ugwo ugwo, N'aka nke ozo, a choro inye ya ego mgbe nile. Ọ na-eme njem gị ozugbo, ya mere na-egosi na ozugbo, ma na ụzọ ya Source .